अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ : नेता रिमाल | My News Nepal
This article has been viewed 1676 times
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ । कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार एकताबद्ध नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका पाँच सदस्यका असन्तुष्टि र आरोपपत्र सार्वजनिक भएपछि अब हुने सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने जवाफलाई प्रतीक्षाका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः
अब प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा दिने लिखित जवाफ कस्तो आउला ? त्यो जवाफले विवादलाई थप चर्काउला वा समाधानोन्मुख बाटो देला ? उहाँले सचिवालयमा जवाफ दिने भनिसक्नुभएको छ । त्यसलाई सचिवालयले अनुमति दिएको छ । उहाँले दिने जवाफमा अहिल्यै अन्दाज गरेर बोल्न उपयुक्त हुँदैन तर उहाँले मङ्सिर ३ गतेको बैठकमा पनि भनिसक्नुभएको छ, आफूविरुद्धको अराजनीतिक आरोपत्र अस्वीकार्य छ, छलफलका लागि योग्य नभएका त्यस्ता लाञ्छना पुष्टि हुँदा आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा बसिरहन मिल्दैन र यदि आरोप पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेले जवाफदेहिता लिनुपर्छ । फेरि पनि उहाँले मिलेर जाऔँ भन्नुभएको छ । आरोप लगाउने नेताहरुले त्यस प्रस्तावलाई मित्रताको ठाउँ राखेर ल्याउनुभएको हो वा वार कि पारको हिसाबले ल्याउनुभएको हो, पहिला त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीको एकता र सहमतिको यात्रा तय हुन्छ । अध्यक्ष ओली पार्टी एकता र निष्ठाको पक्षधर हो । उहाँ विभाजन चाहनुहुन्न । उहाँले विगतमा पनि २०२८ सालदेखि धुजाधुजा भएको पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्नुभएको छ । लोकतन्त्रका खातिर उहाँ १५ वर्ष कठोर जेल जीवनमा बस्नुभयो । पञ्चायत सरकारका पक्षमा कुनै कागज गरिदिएको भए उहाँ रिहा हुन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता गर्नुभएन ।
पार्टीले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने भन्ने तयारी पनि सुनिन्छ नि ? त्यस्तो भएमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प के हुन्छ ? विग्रहको स्थितिमा जाँदा के हुन्छ भनेर अहिले आकलन नगरौँ । मूलतः त्यो लाञ्छनापत्र अध्यक्ष दाहाल जस्तो त्यो तहको नेता आफैँले लेखेको हो वा उहाँलाई त्यस्तो लेख्न कसैले फसाएको हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
पार्टी अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले सानो र कच्चा चित्त राखेर हुँदैन । कसको कुर्सी कता फर्कियो ? कसको रुमाल कता खस्यो भन्ने जस्ता कुराहरुको हिसाब गरेर बस्नु हुँदैन । अपमान र त्यागका कुरा उठ्दा मैले अघि पनि भनेँ कि हामी सहमतीय आधारमा छौँ । लोकप्रिय मतका आधारमा हिस्सेदारी वितरण गरेका छैनौँ । राष्ट्रपति एक धार र उपराष्ट्रपति अर्काे धार, सभामुख र उपसभामुख पनि दुई पक्षले मिलेर लिएको बिर्सन मिल्दैन । पार्टीले महाधिवेशनको तयारी त गरिरहेको छ तर नेकपामा वरिष्ठ नेताहरु धेरै भएर तिनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि देखिन्छ, सँगसँगै पुस्तान्तरणको कुरा पनि आएको छ । दोस्रो पुस्ता कुनै गुटभन्दा माथि गएर नेतृत्व लिन तयार छ ? यो अबको बहसको विषय हो । तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो । साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो । विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) मा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो । नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए । अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ ।